लिडर कसरी बन्ने ? लिडरमा हुनुपर्ने १३ योग्यता पढ्नुहोस् – | सुदुरपश्चिम खबर
लिडर बन्नको लागि तपाई निर्वाचित अधिकारी वा मुख्य कार्यकारी व्यक्ति हुनुपर्दैन । तपाइँ परिवारको लिडर बन्न सक्नुहुन्छ, आफ्नै जिन्दगीको या त कुनै व्यक्तिको ।
लिडर त्यस्तो व्यक्ति हो जो उदाहरणीय हुन्छ,निर्देशन र दिशा प्रदान गर्दछ । नेतृत्व गर्नु एक विशेष कला हो र यो कला सामान्य व्यक्तिहरु भित्र भेट्न सकिन्न।
यो अवश्य हो कि यदि कसैले धेरै मेहनत गर्यो, र निरन्तर आफु भित्र नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमतालाइ बढाउने प्रयत्न गर्यो भने अवश्य पनि यो सम्भव छ । सहि ढंगबाट जीवन व्यवस्थापन गर्न सक्नु पनि यस्तै व्यक्तिहरुबाट संभव हुन्छ, जो भित्र नेतृत्व गर्ने विशेष योग्यता हुन्छ ।
नेतृत्व कला जुनै व्यक्ति को एभचकयलबष्तिथ मा अत्यन्त महत्वपूर्ण र खास कुरा हुन्छ । एक सफल र सन्तुस्ट जीवन कसरी जिउने यो कुरामा पनि निर्भर हुन्छ कि के तपाईं भित्र सही नेतृत्व को क्षमता छ या छैन ? यो एक यस्तो योग्यता हो, जसले जब पूर्णता पाउँछ, तब तपाईं को व्यक्तित्व सही ढंगले विकसित भएको हुन्छ।
अर्को शब्दमा यदि तपाईंले कसैलाई आफुसंग सहि ढंगले सहि ठाउँमा लिएर जान सक्नुहुन्छ ,उसको मार्ग दर्शक बन्न सक्नुहुन्छ र असल कार्य गर्नको लागी प्रेरित गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईं एक असल लिडर हो ।
जीवनमा अगाडी बढ़न होस या देश बिकाश गर्न को लागी कठिन परिस्थितिसंग सामना गर्नको लागी तपाईंमा नेतृत्व क्षमता हुन जरूरी छ । यसैले यदि तपाईं एक सफल लिडर बन्न चाहनु हुन्छ भने तपाईंले यी गुणहरु जान्नै पर्ने हुन्छ ।
एक राम्रो ीभबमभच संग तत्काल र सहि निर्णय लिने क्षमता हुनु पर्छ। किन कि जो व्यक्ति आफ्नो निर्णयलाइ पटक – पटक बदलि रहन्छ, उसको निष्पक्षता र इमान्दारिता सधै शंकास्पद रहन्छ। यदि कुनै गलत निर्णय बाट नकारात्मक परिणाम आयो भने न केवल टिमको मनोबल टूटछ, उनीहरुलाई तपाइको नेतृत्व क्षमतामा पनि शंका हुन सक्छ।
एक प्रभावकारी र सफल लिडर बन्नको निम्ति एक अहम शर्त छ – पछिका कुरालाइ समेत विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता हुनै पर्छ। यस्तो व्यक्ति आफ्नो अदभुत कल्पनाशक्ति र बुद्धिमत्ताको सहायताले पहिला नै भविष्यलाइ योजनाबद्ध गर्न सक्दछ । भिजन भएको ीभबमभचक संग प्रत्येक कार्यको लागी एक स्पष्ट योजना त हुन्छ नै, पहिलो योजनाले काम नगरेको अवस्थामा एक जगेडा योजना पनि सधै तयार हुनु पर्दछ । जसले ति थोरै समयमा नै आफ्नो इच्छित लक्ष्य हासिल गर्न सक्छन , ति केवल अनुमानको आधारमा कुनै पनि काम गर्दैनन्। थोमस कार्लिलको अनुसार “अन्तरदृस्टी बिना नै काम गर्नुले अधिक भयानक असफलात प्राप्त हुन्छ ।” यसैले एक सफल ीभबमभच बन्नको लागी कार्यको योजना बनाउनु र योजना अनुसार कार्य गर्नु धेरै जरूरी छ।
एक सफल ीभबमभच भित्र आत्मविश्वास अनि आशावादी हुनु पर्छ, किन कि आफ्नो क्षमतामा थोरै पनि, मैले गर्न सक्दिन भन्ने खालको बिचारले कुनै पनि व्यक्तिलाइ सफल हुन दिदैन। जो व्यक्तिमा आत्म(विश्वास भरपूर छ र निडर हुन्छ उसलाई कुनै पनि कुरामा नेतृत्व गर्न मुस्किल हुदैन ।आत्मविश्वास नभएका ीभबमभच लाइ उसको अधिनमा कार्य गर्नेले लामो समय सम्म लिडरको रुपमा समर्थन गर्दैनन् । आत्म(विश्वासबाट भरिएको लिडरले आफ्नो टिममा पनि आत्म(विश्वास जगाइ दिन्छन र तिनलाई आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न को लागि उत्प्रेरित गर्छन । एक आत्मविश्वास भएको लिडर नै वास्तवमा एक उच्च आशावादी व्यक्ति हुन सक्छन ।
सत्यसंग नभाग्नु र शक्ति संग नडराउनु एक साहसी व्यक्तिको परिचय हो । साहसी बन्नु एक सफल लिडरको को लागी आवश्यक गुण हो। साहसी हुनु को अर्थ हो – डर लाइ जित्नु, कठिन परिस्थितिको डटेर सामना गर्नु। हामीले मनमा यो राख्नु पर्छ कि बिना साहस हामीले कुनै पनि कार्यलाई सफल बनाउन सकिन्न । हामी दयालु, ईमानदार, उदार या सत्यवादी केहि पनि बन्न सकिन्न। एक ीभबमभच मा बुद्धिमता र साहस संग प्रतिकूल परिस्थितिलाइ सामना गर्नमा सक्षम हुनु पर्छ। चुनौतिलाइ स्वीकार गर्न पर्छ र कठोर परिश्रम गर्ने हुनु पर्छ । यो ध्यान मा राख्नुहोला कि एक दृढ अठोट लिएर हिड्ने मान्छे इतिहास कोर्न र परिवर्तन गर्न सक्छ। एक राम्रो लिडरले ठुलो भन्दा ठुलो समस्याको बीच पनि संतुलित , संकल्पित र सहनशील बनि रहन सक्नुपर्छ।
जिम्मेवारी वहन गर्न सक्नु एक लिडरमा हुनु पर्ने महत्वपूर्ण गुण हो । तपाइ आफ्नो कार्य प्रति जिम्मेवार हुनुका साथ(साथै, आफ्नो अधीनमा काम गर्नेहरुको गल्ति रअसफलताको लागी पनि जिम्मेवार बन्न सक्नु पर्दछ । यदि तपाईं यस्तो गर्नु हुन्न भने तपाईं कहिल्यै पनि आफ्नो टिमको विश्वासलाइ जित्न सक्नु हुन्न र यसका लागी तपाईंसंग जिम्मेवारी स्वीकार गर्न को निम्ति साहस र दायित्वबोध हुनु पर्छ।
एक राम्रो लीडरमा आफ्नो व्यवहार र आफ्नो बोलीमा पूरा नियंत्रण हुनु पर्छ। जो व्यक्ति आफ्नो व्यवहार, वाणी अनि कार्यलाइ जिम्मेवार र अपेक्षित गरीए अनुसार नियंत्रणमा राख्न सक्दैन, उ अरुलाई सही नेतृत्व पनि दिन सक्दैन, किन कि उसको मर्यादा रहित व्यवहारबाट उसको अधिनमा काम गर्नेहरुपनि मनमानी गर्न थाल्दछन । यसैले आफैमा आत्म(नियंत्रण राख्नुले नै, एक ीभबमभच आफ्नो अधिनमा रहेका सबै व्यक्तिहरुलाई सहि मार्ग निर्देशन गर्न सक्छ ।
जीवन सधै मान्छेको इच्छा अनुसार हुँदैन । कठिन परिस्थिति र घटनाक्रम जीवनमा पटक – पटक आइ राख्छन । जब तिनलाई नियंत्रणमा राख्न धेरै कठिन हुन्छ, तव व्यक्ति हार मान्न थाल्दछन तर लिडर बन्न चाहनेले यस्तो परिस्थितिको सामना गर्न सक्नु पर्दछ ।
यस्तो स्थितिमा लिडरले धैर्यवान र सहनशील बनेर कठिन परिस्थितिको सामना गर्न सक्नु पर्दछ ।, धैर्यवान व्यक्तिहरुले नै मुस्किल परिस्थितिसंग सामना गर्न सक्छन र बाधा अड्चनलाई हटाउदै आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सक्छन।
उदारता भनेको मानव भित्र हुने एक इश्वरीय सद्गुण हो। अरु माथि उदारता देखाउने व्यक्तिले अरु मान्छेहरुको सहयोग सजिलैसँग पाउन सक्छ।
अरु माथि दया र सहयोगको भावना देखाउनाले अन्य व्यक्तिहरु विच लोकप्रिय बन्न सकिन्छ जसले गर्दा तपाइलाइ एक असल लिडर बन्न थप सहयोग हुन्छ । एक प्रभावकारी लिडर बन्न को लागि व्यक्तित्वमा उदारता धेरै आवश्यक छ।-गुड न्यूज द्दद्ध डट एनपीबाट